Piyeer Emeriik Obaameyaang - Gaaboon fi Boorushiyaa Doortimand - BBC News Afaan Oromoo
Piyeer Emeriik Obaameyaang - Gaaboon fi Boorushiyaa Doortimand
Goodayyaa suuraa Obaameyaang taphataa Afriikaa jalqabaa seenaa Bundasliigaa Jarmaniin galchii hedduu lakkoofsisuun dursummaan xumre dha.
Seenaa Bundasliigaa Jarman keessatti hanga Obaamiyaang bara 2016/2017'tti galchii 31'n dursummaan xumuretti, gabatee galchii hedduu lakkofsisuu taphataan Afriika kamiyyuu milkeessee hin beeku.
Lakkoofsi kun taphataa lammii Gaaboon kana gita isaa lammii Gaanaa Toonii Yebowaah 1990'mman keessa lama ta'uun caalmaan itti xumure caaluu qofa osoo hin taane, galchii 30 ol lakkoofsisuun seenaa Bundesliigaa keessatti nama 4ffaa akkasumas waggoota 40 as kan jalqabaa isa taasiseera.
Wanti nama ajaa'ibus galchiiwwan 31 kan argaman taphoota 32 irraa qofa ta'uu isaati. Taphataan aariitii guddaafi dandeettii galchii lakkoofsisuu qabu kun garee cimaa Bundesliigaa jedhamee ogeessotaan filatame keessatti waggoota walitti aanan lamaaf akka galu isa dandeessisee jira.
Bitootessa darbe Chaampiyoons Liigii irratti haat-tiriikiin Beenfiikaa irratti hojjate waliigala galchi 40 irra akka ga'u kan isa taasise yoo ta'u, Doortimand Eintrakt Firaankifart injifachuun waancaa Jarman akka moo'u kan taasises kanuma keessaayyu.
Sochiin inni taasisaa ture bareedaa ta'uurraa kan ka'e, Obaameyaang filannoo taphataa cimaa FIFA tiif akka kaadhimamu isa taasisee jira, kun ammoo taphataa Afriikaa isa duraa taasisaan. Badhaasa Baaloondi'ooriif ammoo taphataan ganna 28 kun Badhaasa Taphataa Cimaa BBC'f Saadiyoo Maanee waliin kaadhimamee jira.
Taphataa Afriikaa jalqabaa Bundasliigaa keessaatti galchii hedduu lakkoofsise
Barbaadamummaa kilaboota birootiin qabu
Kilaboonni hedduu taphataa faashinii jaaltu kana mallatteessisuuf fedhii qabu jedhamee odeeffamus, lafarra wanti bu'e hin jiru.
Kilaboonni sooreyyii 'PSG' fi Maanchistar Siitii taphataa kanaaf fedhii qaban mullisanus, abjuu inni ifatti Riyaal Maadriid galuuf qabu garuu, kilabii abbaa isaatiin hedduu jaalatamu kanaan badaa hin barbaadamee milkaa'uufii hin dandeenye.
'Obaa'n ija galchii lakkoofsisuuf qabu fi schii dhuma hin qabnetti fayyadamuun kan bara darbe eegale itti fufuun taphoota jalqabaa 6 irratti galchii 8 lakkoofsisuu danda'ee jira.
Taphataa idil adduunyaatiin dursaan taphattootaa Gaaboon waggaa irraanfachuu qabutu jira - biyyi isaa waancaa Afriikaa qopheessitee gulaallii garee irratti ba'uun biyya 4ffaa yoo taatu schiin agarsiise kna hin gammachiifne ture.
- kanaafuu taphni Jarmanitti mullisaa ture badhaasa BBC akka injifatu isa taasisaa laata?